သူလိုလူ – Pann Satt Lann Books
နိုင်ငံတော်ချစ် သတင်းစာဆရာ၊ နိုင်ငံရေးသမားကြီးတစ်ဦး၏ အလွန်တိုတောင်းလှသော ဘဝသက်တမ်းတွင် ယုံကြည်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းလှပေသော သူ၏အတွင်းရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိကြီးကို ဂျာနယ်ကျော်မမလေးသည် “သူလိုလူ” ဟူသော နာမည်ဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဤဝတ္ထုသည် ဆန်းလွန်းသော လူရိုးတစ်ယောက်၏ အကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ ရိုးလွန်းသော လူဆန်းကြီးတစ်ဦး၏ အကြောင်းလည်းဖြစ်၏။သို့ဖြစ်၍ ဤဝတ္ထုသည် ဆန်းဆန်းနှင့်ရိုး၍၊ ရိုးရိုးနှင့်ပင်ဆန်းနေ၏။
စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ၊ 2016 ဇန်နဝါရီလ၊ (ဧကာဒသမ-ကြိမ်)
1.5.2022 နေ့မှစတင်၍ မူရင်းထုတ်ဝေတိုက်မှ ကျပ် 9000 စာအုပ်စျေးနှုန်းအသစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါသည်။
သူလိုလူ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု3ရှိပါသည်။
Eaint Mhue – November 22, 2020
၉တန်းတုန်းက Bio ဆရာက “ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်ဆိုတာ သူ့ထီးရိပ်အောက်မှာ မိုးခိုရင်း သူ့အိတ်ထဲကပိုက်ဆံကိုနှိုက်နေတဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်ကိုတောင် နှိုက်ရတာပိုလွယ်အောင် မသိမသာနဲ့အိတ်ကပ်လေးကိုဟပေးခဲ့တာ. . အဲ့သလောက်စိတ်ထားကောင်းပြီး ငဲ့ညှာတတ်တာ. . ” ဆိုပြီး ဦးချစ်မောင်ရဲ့ရိုးသားပုံတွေကိုပြောပြောပြပြီး “မင်းတို့ အဲ့ဒီဦးချစ်မောင်အကြောင်းရေးထားတဲ့ “သူလိုလူ”ကို ဖတ်ကြစမ်းပါ၊ အတုယူကြစမ်းပါ၊ အဲ့လိုစာအုပ်မျိုးတွေဖတ်ရမှာ”လို့ စာသင်ရင်းအမြဲပြောပြောနေကျမို့ အဲ့ကနေစပြီး သိရှိဖတ်ရှုရင်း ရင်းနှီးခဲ့တယ်ဆိုပါတော့. . .
ဦးချစ်မောင်ဟာ နယ်ချဲ့လက်အောက်ကနေ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရအောင်ကြိုးစားကြတဲ့နေရာမှာ ကလောင်လက်နက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အလျောက် အဲ့ဒီခေတ်အခါက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလည်း ပါသင့်သလောက်ပါပါတယ်။
ပြည်သူကိုသတင်းပေးတဲ့ သတင်းစာတစ်စောင်ဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ၊ အရေးပါအရာရောက်သလဲဆိုတာကလည်း မပါမဖြစ်ပေါ့။
သူ့ဘဝမှာ အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ကတော့ သူနဲ့အကျင့်စရိုက်ချင်း သိပ်ကိုတူလှတဲ့ Queed ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါတဲ့၊ (ဦးဝင်းတင် ဘာသာပြန်ထားတာရှိပါတယ်၊ “ကွိ” ဆိုပြီးရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။)
ဆရာဝန်လည်းဖြစ်ချင်/သတင်းစာဆရာလည်းဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ဦးချစ်မောင်တစ်ယောက် သတင်းစာလောကကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကလည်း လေးစားစရာပါ။
ရိုးသားတဲ့နေရာမှာ သြချရလောက်အောင် ရိုးလွန်းတဲ့လူဆန်း၊ ဆန်းလွန်းတဲ့လူရိုးလူဖြောင့်ကြီး ဦးချစ်မောင်. . .
ကိုယ်ကျိုးစွန့်တဲ့နေရာမှာလည်း အံ့သြရလောက်အောင်စွန့်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဦးချစ်မောင်. . .
သူ့ကြင်ဖော် ဂျာနယ်ကျော်မမလေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ “ကျွန်တော်တော့စျာန်လျှောပြီ”လို့ ထုတ်ပြောရလောက်တဲ့ထိ အရင်ကဘယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့မှ အဆက်အဆံမရှိ တည်ကြည်ခဲ့တဲ့ဦးချစ်မောင်. . .
ဘယ်တော့မဆို သူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ချပြီးပဲပြောတတ်/ဆက်ဆံတတ်တဲ့ ဦးချစ်မောင်. . .
သူ့ဘဝတစ်လျောက်လုံးမှာ သူ့ထက်နိမ့်ကျတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမပြောနဲ့၊ ခွေးတစ်ကောင်ကိုတောင် ခြေနဲ့မကန်ဖူးခဲ့တဲ့ ဦးချစ်မောင်. . .
နိုင်ငံ့အရေး၊ ပြည်သူ့အရေးကို အစဥ်တစိုက်ဂရုစိုက်ပြီး သူ့အသိ၊ သူ့ပညာတွေအမြဲမျှဝေခဲ့ပေမယ့်
သူ့ဘဝနဲ့ယှဥ်ပြီးပေးခဲ့တဲ့ Message ကတော့ ဝါသနာပါရာ/စေတနာသန်ရာကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုပေမယ့် ကျန်းမာရေးကိုတော့ အလွန်အကျူးလျစ်လျူရှုမထားဘဲ ဂရုစိုက်သင့်တယ်ဆိုတာပါပဲ. . .
သြော်. . . ဦးချစ်မောင်. . .
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကြွေလွင့်ခဲ့ရတယ်. . .
နှမြောပါဘိခြင်း. . . နှမြောလှပါဘိခြင်း. . .
မလေး – December 27, 2020
“ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်” အကြောင်းရေးထားတဲ့ သူလိုလူ စာအုပ်ကဖြင့် ပညာရှိသုခမိန်ကြီး ဆရာဦးချစ်မောင်၏
-ပြည်သူတို့အတွက် သတင်းအမှန် ဖြစ်မြောက်စေရေးအတွက် ရရာကလောင်စွဲကိုင်ပြီး လမ်းပြပေးခဲ့သူ
-ပညာအရာတွင်လည်း ထိုထိုအီအီစာပေမှန်သမျှ ဖတ်ရူကာ ပညာခန်းမှ နိုင်ငံတော်အတွက်နေရာမရွေး အချိန်မရွေး အသင့်ဖြစ်နေတတ်သူ
-ဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုရင် မိမိကျန်းမာရေးထိခိုက်သည်အထိ စာပေဖတ်ရူကာ နိုင်ငံတော်အတွက် ဉာဏအားဖြင့် အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့သူ၊ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ
အကြောင်းရေးသားထားသည်မှာ ဆရာမနှင့်ထပ်တူလွန်စွာနှမြောတသဖြစ်မိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာထိုကဲ့သို့ ပညာရှိတွေရှိခဲ့သည့်အကြောင်း သိခွင့်ရအောင်ရေးသားထုတ်ဝေပေးခဲ့သည့်အတွက်လည်း ဆရာမဂျာနယ်ကျော်မမလေးကိုလည်းလွန်စွာကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ နောင်လာနောင်သားတွေသိရှိနိုင်ဖို့ အိမ်တိုင်းရှိသင့်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ပါပဲရှင်။
အောင်နွယ်ထွန်း – September 10, 2021
အခုဆို “သူလိုလူ” ဧကာဒမအကြိမ် စာအုပ်ထုတ်ဝေရောင်းချခဲ့ပြီးပြီ။
စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ မှားတာတွေ အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရလို့ ဖတ်နေရင်းနဲ့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်။ ကန့်ကွယ်(မှားရိုက်) ၊ တစ်စုံတစ်ရာ၊ တစ်လုံးတစ်ဝတည်း၊ တစ်ပါတည်း၊ မှတစ်ဆင့်၊ … ဆိုတာတွေမှာ တဝမ်းပူကိုစသတ် စရာ မလိုပါဘဲ နေရာတိုင်း ထည့်‌ရိုက်ထားတယ်။ စာရိုက်သူအမှားလား၊ စာစစ်သူတွေရဲ့အမှန်ထင်မှုလား မဝေခွဲတတ်ပါ။ ပထမအကြိမ်ထုတ် စာအုပ်အတိုင်း စာလုံးပေါင်းစေချင်ပါတယ်။